Uyifumana njani i-visa eBulgaria? - ALinks
I-visa yaseBulgaria yimvume enikezelwa kwilizwe langaphandle ukuba ingene, ihlale okanye idlulele kwisikhululo seenqwelomoya. Ukufikeleleka kuya kupapashwa ngohlobo lokuncamathela kuxwebhu lwangaphandle okanye kolunye uxwebhu olunikezelwe endaweni elungileyo nolulungeleyo kwaye luya kusebenza kuphela ngengqondo yolo xwebhu kunye nesizathu sokuba ikhutshelwe i-visa.
I-visa iya kufumaneka kuphela ngencwadana yokundwendwela esemthethweni. Ukuba ukufikelela okutsha kunikwa umntu osele efumene ukufikelela kwi-Bulgaria kunye nepasipoti yase-Bulgaria irhoxisiwe, nokuba imvume ayikaphelelwa lixesha, ukuba umntu ufuna ukuqhubeka notyelelo eBulgaria, kufuneka afake isicelo ivisa entsha enepasipoti entsha.
I-visa iyafuneka kubemi baseIndiya abajonge ukutyelela eBulgaria. Ukuba uhlala eIndiya, nceda ujonge eli nqaku malunga Uyifumana njani i-visa yaseBulgaria kumaIndiya.
Nceda uqaphele ukuba, ngokuthobela izigqibo zikaRhulumente waseBulgaria, bonke abakhenkethi abanamaxwebhu asemthethweni eSchengen kunye nabemi baseRomania, eCyprus, naseCroatia abanee-visa ezimbini okanye ngaphezulu zokungena kunye neemvume zokuhlala abafuni ukuba iBulgaria ibe nokufikelela okongeziweyo.
Abahambi abangabanini be:
I-visa engafaniyo (C) yokungenisa kabini okanye okuninzi, okusebenzayo kuwo onke amaLungu amaLungu eSchengen;
Ukuhlala ixesha elide i-visa (D) ekhutshwe lelinye lamaLungu eSithili saseSchengen ukuba ihlale ngaphezulu kweenyanga ezintathu;
Imvume yokuhlala enikezwe lelinye laMazwe angamaLungu eSchengen Area;
iivisa zikazwelonke ezimbini okanye nangaphezulu zokungeniswa kweRomania, iCypriot, kunye neCroatia okanye iimvume zokuhlala.
Awudingi visa yokuhamba okanye ucwangcise ukuhlala kumhlaba waseBulgaria nakweyiphi na iinyanga ezintandathu, ungadlulanga kwiintsuku ezingama-90.
Undwendwe aluyi kuvunyelwa ukuba luhlale iintsuku ezininzi eBulgaria kunokuba kuchaziwe kwi-visa. I-visa ayithathi inani leentsuku ezichithwe eBulgaria.
I-visa yokungena emininzi esemthethweni ukuya kunyaka omnye inokunikwa ilizwe langaphandle. Ilizwe langaphandle lifumene ukufikelela kokufutshane kunyaka ophelileyo kwaye lisetyenziswe ngokuhambelana neemfuno zomthetho zokungena nokuhlala kwiRiphabhlikhi yaseBulgaria.
TNazi izizathu zokufaka isicelo, ngolu hlobo lulandelayo, kwi-visa yokungena emininzi:
Ubudlelwane beshishini bexesha elide phakathi kwebango kunye neBulgaria yendalo okanye abantu abasemthethweni abasebenza phantsi koMthetho wezoRhwebo bagcinwa;
Umfaki-sicelo uya kuxhasa amakhonkco entengiso exesha elide namaziko asemthethweni aseBulgaria asebenza phantsi koMthetho weZiko elingenziNzuzo
Umenzi-sicelo ugcina unxibelelwano lweshishini lwexesha elide, elibhaliswe phantsi kweSiqendu 24 soMthetho wokuKhuthazwa koTyalo-mali, kunye nabameli bezinto ezisemthethweni zangaphandle;
Umenzi-sicelo wenze igalelo elibalulekileyo lobuqu ekusekeni ubudlelwane kunye neRiphabhlikhi yaseBulgaria.
Ukulandela umthetho wabaphambukeli kwiRiphabhlikhi yaseBulgaria, umfaki sicelo lilungu losapho laseBulgaria.
Ibango ngumhlali welungu leLungu le-European Union, yeNgingqi yezoqoqosho yaseYurophu okanye iSwitzerland Confederation ehlala ixesha elide kwiRiphabhlikhi yaseBulgaria.
Ibango lilungu losapho lwasemzini ebehlala kwiRiphabhlikhi yaseBulgaria ixesha elide ngelixa egcina ukuhlala kwakhe phesheya;
Umfaki-sicelo ngumqhubi wezothutho ezindleleni okanye umhambi kunye nenkqubo yothutho kaloliwe, lilungu.
Ngokusekwe kwi-visa yexesha elifutshane, umphambukeli akakwazi kusebenza eBulgaria.
Aba bantu balandelayo baxolelwe ekunikezeleni iinyani ezinxulumene nokutya, indawo yokuhlala, kunye nezothutho:
Amalungu e-European Union iintsapho okanye amakhaya, abemi boMmandla wezoQoqosho waseYurophu kunye neSwitzerland Confederation;
Abaphathi beenkonzo kunye neepaspoti zozakuzo
Aba bantu balandelayo baxolelwe ekubonisweni komgaqo-nkqubo we-inshurensi:
Usapho okanye amalungu asekhaya eManyano yaseYurophu, uMmandla wezoQoqosho waseYurophu, kunye nabemi beSwitzerland Confederation
Ungasifaka njani isicelo seVisa ekwi-Intanethi?
Gcwalisa ifom yesicelo kwi-Intanethi.
Gcwalisa isicelo se-intanethi esilula kwaye uhlawule ngekhadi lekhredithi okanye i-PayPal
2. Qinisekisa ukuba uKhuseleko lwakho luKhuselekile
Umzi wozakuzo / umcebisi wakho uya kukunceda nakuyiphi na imeko kaxakeka (umzekelo, iintlekele zendalo, izidubedube zasekuhlaleni, njl. Njl.)
3. Faka isicelo ngoku i-visa
Kuya kufuneka ufune olu Lwazi ukuze ufake isicelo:
Nje ukuba ubhalise kummeli-lizwe, uya kuhlaziya idatha yakho ukuba:
Ukutshintsha iinkcukacha zakho zonxibelelwano,
Utshintsho kwimeko yakho yomthetho,
Ubuyela kwilizwe lakho lokuzalwa.
Kutheni ubhalisa kwindlu yozakuzo
Ubhaliso loKhenketho yinkqubo ebonelelwe ngurhulumente. Le nkonzo ikwenza ukuba urekhode ulwazi kwiSebe likaRhulumente malunga nohambo lwakho oluza phesheya ukuze lusetyenziswe kwimeko kaxakeka ukukunceda. Ukuba unelayisensi, abantu abahlala kwelinye ilizwe banokufumana iinkcukacha zesiqhelo kwi-ofisi yozakuzo ekufuphi kubo.
Ulwazi kubanini bekhadi lokuhlala lelungu losapho lommi waseManyano:
Ilungu losapho leLungu leLungu le-EU okanye iNdawo yezoQoqosho yaseYurophu (i-EEA) inokuhamba iye eBulgaria ngaphandle kwe-visa ukuba inepasipoti esemthethweni kunye nekhadi lokuhlala elililungu losapho lommi wase-EU kwaye Ukuhamba okanye ukujoyina ilungu losapho leLungu leLungu le-EU okanye i-EEA. Masithi ilungu losapho lommi welungu leLungu le-EU okanye i-EEA ayinayo incwadana yokundwendwela. Kwimeko apho, i-visa yaseBulgaria kulindeleke ukuba inikwe simahla ngokuxhomekeke kwinkqubo ekhawulezileyo.
IVisa yokuhlala ixesha elifutshane (i-C-visa) ivumela abakhenkethi ukuba bahambe okanye bahlale kwiRiphabhlikhi yaseBulgaria intsimi kangangeentsuku ezili-180 ubuninzi beentsuku ezingama-90. Ikhutshelwa uhambo, ukhenketho, ishishini, abucala okanye ezinye iinjongo zokungena, ezimbini, okanye ezininzi. Ubude bayo bokusebenza buxhomekeke kwiimeko apho undwendwe lutyelele eBulgaria.
Imirhumo yeVisa yokungena kunye nokuhlala
Intlawulo yeVisa yabantwana iminyaka eyi-6-11
Imvume yokuhlala yokuhlala yokuqala okanye umntu ozimeleyo
Imvume yokuqala yokuhlala okanye yokuzimela, isicelo se-elektroniki
Imvume yokuqala yokuhlala, kungakhangelwa kwimarike yezabasebenzi (eminye imisebenzi, ingcali, umphandi, iimbaleki, umqeqeshi okanye umqeqeshi)
Visa kumazwe asimahla eFinland
I-visa yase-USA yamaIndiya
Oktobha 11, 2020
Ungasifaka njani isicelo seVisa eMexico? Isikhokelo esifutshane
Uyifumana njani i-visa yabakhenkethi eJamani?
Ungayifumana njani i-visa yabafundi eCanada?
Ziziphi iimfuno ze-visa eColombia?
Uthuthela njani eMalaysia usuka eIndiya
Uyifumana njani i-visa yeGhana?
Unonophelo Lwezempilo e-UAE !!
I-Sweden idibanisa, iwebhusayithi yolwazi, amaqela okuxoxa
Ungawufumana njani umsebenzi eMexico?
Ungawufumana njani umsebenzi eChile? Isikhokelo esikhawulezayo sabasemzini kunye nabaseChile
Uluhlu lwezibhedlele eOstreliya
Izindlu kunye nerenti eRashiya
Luxabisa malini uhambo oluya eTshayina?
Uluhlu lwezibhedlele e-USA
Amazwe asimahla eVisa kwipaspoti yaseGhana
Iincwadi ezilungileyo kakhulu omele uzifunde ngaphambi kokuba usweleke
Zeziphi iiyunivesithi ezilungileyo kakhulu ePakistan?
Afghanistani (13) uncedo (10) Alibhaniya (9) Ostreliya (18) Ostriya (14) iibhanki (37) Khanada (24) iTshayina (17) Dominikha (12) Fransi (16) Jemani (17) yibakhona (28) impilo (29) Hong Kong (12) iihotele (29) izindlu (14) Indiya (87) Irakh (15) ElamaTaliyane (24) imisebenzi (125) Maleyishiya (12) Mekhsikho (27) imali (71) Nayijeriya (12) Norowe (13) Phakistan (13) ababaleki (55) Rhashiya (16) ISaudi Arabia (9) isikolo (23) Speyin (19) isifundo (36) Swizalend (10) Thayilendi (13) izinto ukuthenga (106) izinto zokwenza (52) hamba (239) ikarikuni (29) UAE (14) Uganda (9) UK (59) i-USA (38) amakhonkco aluncedo (23) Venezuela (13) ivisa (152)